Ogaden News Agency (ONA) – War-Murtiyeedkii ka Soo Baxay Shirweynihii Jaaliyadaha Ogadenya uga Socday London oo Guul ku Dhamaaday
War-Murtiyeedkii ka Soo Baxay Shirweynihii Jaaliyadaha Ogadenya uga Socday London oo Guul ku Dhamaaday
Posted by ONA Admin	/ September 15, 2014
Sidaad la socoteen waxaa ka socday magaalada London Shirweynihii jaaliyadaha Ogadenya ee sanadlaha ahaa. Shirkan oo ahmiyad gaar ah u lahaa halganka isagoo ku soo beegmay 30Guurada asaaskii JWXO ayaa waxaa lagu falanqeeyay arima badan oo muhiim u ah halganka uu shacabka S.Ogadenya ugu jiro xaqiijinta Xaqooda Aaya-Ka-tashi iyo qodobo kale oo la xidhiidha hawlaha jaaliyadaha iyo sidii loo garab istaagi lahaa shacabka uu gumaysiga Itobiya ku dulmayo dalkoodii hooyo.
Waxaa shirweynaha Sanadka marti-sharaf u ahaa wafdi balaadhan oo ka socda Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya oo uu hogaaminayo Gudoomiyaha Jabahdda Adm. Maxamad C. Cismaan. Sidoo kale waxaa fadhiyay oo khudbado dhaxalgal ah ka jeediyay wufuud ka kala socota qawmiyadaha Itobiya ee mucaaradka ku ah maamulka cadadaiska ku dhisan ee TPLF iyo mart-sharaf kale oo ka socotay haya’do caalami ah iyo dalka UK. Khudabadahaa ayaad kala socon doontaa IleysTV.
Hadaba shirka oo furmay 12kii Bishan Sep. 2014 ayaa shalay lasoo gabagabeeyay waxaana kasoo baxay war-murtiyeedkan loogu talagalay saxaafadda oo ah cinwaanada arimhii lagu falanqeeyay shirweynaha. Halkan ka akhri :
Shir-Sanadeedka Jaaliyadaha Ogadenya 12-14, Sep.2014